Sawirada NASA ee isbedelka cimilada | Saadaasha Shabakadda
Sawirada NASA ee isbedelka cimilada
Monica Sanchez | | Sawirro
Markuu meeraha kululaado oo dadka bini aadamka ay sii kordhaan, waxaa kusii fududaanaysa meeraha in la arko isbadalada dhacaya. Dabka la socda abaaraha ba'an iyo daba dheeraaday, harooyinka iyo badaha oo qalala, ifafaalaha saadaasha hawada sida duufaannada ama duufaannada sii xumaanaya ...
Laakiin marar badan waxaan u maleyneynaa in kuwani ay yihiin ereyo uun; taasi maahan inay na saameyso. Si kastaba ha noqotee, ka fikirida taasi waa khalad, maxaa yeelay dhammaanteen waxaan ku nool nahay hal adduun, dhammaantood, goor dhow ama goor dambe, waxay arki doonaan saameynta kululaynta caalamiga ee aaggeenna. Dhanka kale, waxaannu kaaga tagaynaa adiga lix sawir oo ay qaaday NASA oo muujinaya xaqiiqada adag.
2 Colorado (Mareykanka)
3 Harada Poopó, ee Bolivia
4 Badda Aral, Bartamaha Aasiya
5 Lake Powell, oo ku taal Mareykanka
Sawir - NASA
Sawirkaan waxaad ku arkeysaa in aagga uu ku dahaadhay barafka dhalinyarada ah, taasi oo ah, muuqaal dhowaan soo baxay, inuu ka yaraaday 1.860.000km2 bishii Sebtember 1984, ilaa 110.000km2 bishii Sebtember 2016. Barafkan noocan ah wuxuu aad ugu nugul yahay kuleylka adduunka. maadaama ay ka khafiifsan tahay oo si fudud oo dhaqso badan u dhalaasho.
Xaaladda gaarka ah ee Greenland, waa iska caadi in gu 'kasta ama horraanta durdurrada webiyada, wabiyada iyo harooyinka ay ku dul samaysmaan dusha sare ee barafka. Si kastaba ha noqotee, dhalaalida barafku waxay bilaabatay horaantii sanadka 2016, taas oo muujineysa in dhalaalka qeybtan ka mid ah adduunka ay bilaabeyso inay noqoto dhibaato, oo halis ah.
Laga soo bilaabo 1898, Arapaho Glacier oo ku yaal Colorado wuxuu ku yaraaday ugu yaraan 40 mitir sida ay sheegeen saynisyahano.
Harada Poopó, ee Bolivia
Harada Poopó, oo ku taal Bolivia, waa mid ka mid ah harooyinka dadka aad looga faa’iideysto, kuwaas oo biyahooda u isticmaalay waraab. Abaarta sidoo kale waa mid ka mid ah dhibaatooyinkiisa, sidaa darteed ma oga inuu soo kaban karo iyo in kale.
Badda Aral, Bartamaha Aasiya
Badda Aral, oo mar ahayd harada afaraad ee ugu weyn adduunka, hadda is waxba ma ahan. Meel lama degaan ah oo ay hore u ahaan jirtay biyo lagu waraabiyo cudbiga iyo dalagyada kale.
Lake Powell, oo ku taal Mareykanka
Abaarta daran ee daba dheeraatay ee Arizona iyo Utah (Mareykanka), iyo sidoo kale ka bixitaanka biyaha, ayaa sababay hoos u dhac weyn oo ku yimid heerka biyaha harada. Bishii Meey 2014 ayaa baddu joogtey 42%.
Hadaad rabto inaad aragto sawiradan iyo kuwa kale, riix halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Sawirro » Sawirada NASA ee isbedelka cimilada
Waa maxay maalinta ugu roobka badan toddobaadka?
Jardiinooyinka Gorgoniyanka ee Ecuador ayaa waxaa khatar ku ah kuleylka adduunka